सावधान ! यस्तो सामान्य समस्याले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर पनि हुनसक्छ , कसरी थाहा पाउने ? – Medianp
सावधान ! यस्तो सामान्य समस्याले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर पनि हुनसक्छ , कसरी थाहा पाउने ?
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०७५११:०६0
काठमाडौ । नेपालमा वर्षेनी १५ वर्ष भन्दा माथिका धेरै युवतीहरुको पाठेघरको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको हुन्छ । एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार पाँच सय महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखापर्ने गरेकामध्ये करिब एक हजार चार सयको मृत्यु हुने गरेको जनाएको छ । यसको मुख्य कारण जनचेतना अभाव , लाज मान्ने प्रवृति र समाजमा भएका अन्धविश्वास नै प्रमुख हो । तर सरकारले देशभरका सरकारी अस्पताललाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण सेवा प्याप स्मेयर टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध गराउदै आएपनि यो समस्याबाट धेरै महिलाहरु पिडित हुन्छन् । त्यसैले पाठेघरको सक्रमण समयमै थाहा पाउन नसके ८ देखि १० वर्षपछि यो क्यान्सरमा परिणत भई हाम्रो जीवनै वर्वाद हुनसक्छ ।
पाठेघरको मुखमा क्यान्सर छ कि छैन् कसरी थाहा पाउने ?
क्यान्सर हुनुपूर्व एक भाइरसले सक्रमण गर्छ जसलाई प्रि क्यान्सर भनिन्छ । यो भाइरसले पाठेघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ । त्यसैले हामीले पाठेघरको क्यान्सर भए नभएको प्याप स्मेयर टेस्ट गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्याप स्मेयर टेस्टलाई पाठेघरको मुखको पानीको जाँच अर्थात् गर्भाशय स्राव परीक्षण गर्ने विधी सबैभन्दा सजिलो जाँच विधि हो । यो जाँच गराउँदा महिलालाई धेरै झन्झट र दुःख हुँदैन । प्याप स्मेयर टेस्ट गर्दा स्त्रीरोग विशेषज्ञले पाठेघरको मुखबाट कोष निकालेर एउटा सिसामा फैलाएर प्याथोलोजिस्ट कहाँ पठाएपछि प्याथोलोजिस्टले माइक्रोस्कोपमा ती कोषहरुलाई हेरेपछि त्यसमा संक्रमण रहेको वा क्यान्सर नै रहेको भन्ने पत्ता लाग्छ ।
कुन उमेर समुहको युवतीले कति पटक परिक्षण गर्ने ?
यसको सामान्यतया २१ देखि ६५ वर्ष उमेरका महिलाले परीक्षण गराउनुपर्छ । यो परीक्षण पहिला ६ महिनाको फरकमा तीनपटक गर्नुपर्छ । तीनैपटक परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएमा फेरि एक वर्षपछि परीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा पनि नेगेटिभ देखिएमा ३ वर्षपछि परीक्षण गराए हुन्छ । फेरी पनि नेगेटिभ देखिएमा ५ वर्षपछि परीक्षण गर्नुपर्छ ।
परिक्षण गर्न कति समय लाग्छ ?परिक्षणको समयमा के गर्ने के नगर्ने ?
यो परिक्षण गर्नको लागी ५ देखि १५ मिनेटमा गर्न सकिन्छ । तर विचार गर्नुस् प्याप स्मेयर गर्दा दुई दिनअगाडि देखि यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन । त्यस्तै महिनावारी भएको महिलाहरुले पनि गर्न हुदैन् । परिक्षण गर्नु एक हप्ताअघि एन्टिबायोटिक औषधि पनि खानु हुँदैन । यदि कुनै महिलाको पूरै पाठेघरको शल्यक्रिया गरेको छ भने ती महिलाले यो जाँच गराउनु पर्दैन । तर गर्भवती भएको बेलामा पनि यो जाँच गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले यसको प्रक्रिया लामो भएकाले बीचमा परीक्षण गर्न छाड्ने गरेको पाइन्छ तर परीक्षण गर्न छाड्नु हुँदैन ।
चर्चित कमेडियन ब्रह्मानन्दमको मुटुको अप्रेशन, अलु अर्जुनले भेटे , लेखे यस्तो स्टाटस
विदेशबाट परिवारलाई केही सामान ल्याएका नेपालीको आक्रोश, विमानस्थलमा आफ्नै देशको सरकारले लुट्यो